3rd Street Retreat - I-Airbnb
ICentral Pennsylvania! Ucoceko, ubucala kwaye ucocekile useto nje ezimbalwa kwiibhloko zenkundla yenkundla, iiofisi zolawulo lwedolophu, abarhwebi basekhaya, iindawo zokutyela kunye nobomi basebusuku. Ikhitshi lixhotyiswe ngokupheleleyo kwaye libandakanya ukhetho lokuzenzela isidlo sakusasa, ikofu, iti kunye nokutya okutyiwayo!
Indlu encinci Ibandakanya i-intanethi ekhawulezayo, i-wifi, iiTV ezimbini, ubushushu bombane kunye nefestile yomoya, iwotshi ye-alarm, isitulo, isitulo sothando, idesika, ibhedi yokumkanikazi enye kunye nebhedi enye. Coca iitawuli, amashiti, iingubo kunye nekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo.
\_u00A0iibhedi zabantwana eziyi-2
4.89 · Izimvo eziyi-111
Isetingi yedolophu encinci kwidolophu yaseClearfield. Iindawo zokutyela, ubomi basebusuku, izinto zemidlalo kunye nokuzingela, abathengisi, iivenkile zamandulo, iiofisi zomthetho, iinkonzo zentlalontle, ii-ofisi zenkundla kunye neearhente zikarhulumente.
Siya kuhlonipha ubumfihlo bakho kunye nendawo. Siyavuya ukwamkela utyelelo kunye nomdla zentlalo xa siceliwe. Sithumele umyalezo ngeAirBnB iiyure ezingama-24 ngosuku, iintsuku ezisi-7 ngeveki.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Clearfield